Xeeladaha Wacyigelinta ee SNAP - Shuraakada Oregon-Gaajo Xorta ah
Waxaa jira siyaabo badan oo lagu gaarsiin karo dadka Oregon macluumaadka ku saabsan SNAP. Waxaad ka caawin kartaa faafinta ereyga ku saabsan barnaamijkan gargaarka cuntada muhiimka ah adigoo u maraya wacyigelinta SNAP.
Aasaaska Wacyigelinta SNAP
Wacyigelinta SNAP waxay ku salaysan tahay fariimo togan oo wadaaga aasaaska barnaamijka, bixisa macluumaadka u-qalmitaanka, wax ka qabta fikradaha khaldan, oo caawiya dadka ku toosisa habab sahlan oo ay ku dalban karaan. Waxay ka jawaabaysaa su'aalaha: waa maxay SNAP, yaa u qalma, iyo sida loo codsado.
Xeeladaha fidinta SNAP ee waxtarka leh waxay gaadhaan dadka halka ay mar horeba ka heli jireen macluumaadka ama agabka. Tani waxay u ekaan kartaa dhajinta agabka wacyigelinta ee goobaha dad waynaha, in mutadawiciinta ku jira kaydka cuntada ay wadaagaan macluumaadka SNAP, baadhista sugnaanshaha cuntada ee goobta rugta caafimaadka iyo bixinta macluumaadka gudbinta SNAP, ama ku xidhida dadka SNAP taasoo qayb ka ah habka qaadashada marka qof uu galo barnaamijyada kale ee taageerada sida kaalmada tamarta ama cuntada dugsiga. Kooxaha bulshada iyo shakhsiyaadka la aamini karo waxay gacan ka geysan karaan hoos u dhigista dhaleeceynta waxayna dadka ku xiri karaan SNAP iyada oo loo marayo ficillo fudud oo saameyn xooggan leh.
Soo dejiso ilaha SNAP
Wax badan ka baro SNAP
Waxaan ognahay inay dareemi karto dhib badan in lala wadaago SNAP gaar ahaan marka ay u muuqato inay jirto macluumaad badan oo la gudbiyo. Taasi waa sababta aan u bixino tababaro shaqsi ah iyo mid online ah. Tababaradayadu waxay wax ka qabtaan aasaaska barnaamijka, hagaynta nidaamka codsiga, tilmaamaha u-qalmitaanka, xeelado wacyigelineed oo wax ku ool ah, iyo sida loo bixiyo kaalmada codsiga hab fudud oo kaa caawinaysa inaad diirada saarto macluumaadka muhiimka ah ee aad u baahan tahay inaad ogaato. Gaadho anaga haddii aad xiisaynayso!
KU XIDHNOW 211
Dadka aan loo adeegin
Wacyigelinta waxay diiradda saari kartaa kooxo gaar ah oo dadwayne kuwaas oo leh heerar ka-qaybgalka SNAP hoose. Gaar ahaan, dadka waaweyn ee waaweyn, ardayda tacliinta sare, da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 50 aan carruur lahayn, iyo qoysaska leh xaalad socdaal oo isku dhafan ayaa ka qaybqaata heerar hoose. Tani waxay noqon kartaa sababta oo ah caqabadaha sida shuruudaha u-qalmitaanka dheeriga ah ama macluumaad khaldan, dhibaatooyin ku saabsan habsocodka codsiga, ceebaynta, ama sababo kale oo badan.
Hal dariiqo oo wax looga qabto caqabadaha waa in la barto shuruudaha u-qalmitaanka gaarka ah ee kooxaha qaarkood, sida ardayda iyo dadka qaangaarka ah ee da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 50, ay u baahan karaan inay buuxiyaan. Mid kale waa in la siiyo kaalmada codsiga dadka laga yaabo inay u baahan yihiin caawinaad dheeri ah oo codsanaya SNAP, sida dadka waaweyn.
Baro wax badan oo ku saabsan wax ka qabashada u-qalmitaanka SNAP iyo gelitaanka:
Waxaan bixinaa caawimo farsamo iyo hagitaan leh xeelado, agab iyo agab, iyo macluumaadka SNAP.
Waxaan ka caawinaa shakhsiyaadka inay maraan kiiskooda SNAP haddii ay la kulmaan wax arrimo ah ama haddii ay u maleynayaan in go'aan u-qalmitaanka khaldan la sameeyay.
Wax ka baro kuwa kale ee sameeya wacyigelinta SNAP ee Oregon oo dhan. Ku biir O-SNAP, oo ah liis xog-waraysi ah oo gobolka oo dhan ah, ka qaybqaado shirar shaqsiyeed ama tababaro, oo hel tixraacyo ururada shaqadan ka haya agagaarkaaga.
Ku xidhnow kooxdayada wacyigelinta SNAP
Maareeyaha Barnaamijka Sare, SNAP
503-595-5501 Dheeraad ah. 308